Fifandraisana amin'ny lalamby any Sri Lanka ~ Journey-Assist - Lamasinina. Fandaharam-potoana. Sari-tany. Karaoty sarety
Pejy fandraisana » Fitateram-bahoaka any Sri Lanka » Sri Lanka » Asia » Eran-tany / Faritra » Fifandraisana amin'ny lamasinina any Sri Lanka
Fifandraisana amin'ny lamasinina any Sri Lanka. Fandaharam-potoana. Karazana fiara. vidin'ny
12 Febroary, 2020
Fampiononana sy kalesy amin'ny lamasinina ao Sri Lanka
Endrik'anarana tapakila + fandaharam-potoana + vidiny
Referansa Rail ao Sri Lanka
Fampahalalana ankapobeny momba ny lalamben'i Sri Lanka
Fiaran-dàlana Sri Lankanina. Kilasy fiara
Lamasinina tao Sri Lanka
Antsipirihany momba ny kilasin'ny fiara:
Fiara kilasy voalohany
Fiara fitsangatsanganana kilasy voalohany amin'ny fiaran-dalamby ao Sri Lanka
Ny fiara kilasy voalohany amin'ny fiaran-dalamby ao Sri Lanka dia mety misy karazana roa:
Alina (matory). Nasiana coupes indroa. Ao amin'ny fitoerany dia misy toerana iray hanasana fandroana kely ary na trano fidiovana manokana aza. Ireo fiara amin'ity karazana ity dia misy fitaovana fandriana fandriana ihany koa.
Fiara fijery. Ny sarety toy izany dia tsy hita ao amin'ny lalan'ny fanadihadiana avy any Colombo mankany Kandy sy Badulla. Ireo fiara amin'ity kilasy ity dia matetika mipetraka any amin'ny faran'ny lamasinina ary manana varavarankely aoriana aoriana. Matetika miaraka amin'ny fametrahana mari-pana. Ny seza amin'ireto fiara ireto dia tena mahazo aina ary afaka mihodina mihitsy koa ny 360 °.
Fiara kilasy faharoa
Ny fiara kilasy faharoa dia tsy hita ankehitriny, fa tena mahazo aina amin'ny fandehanana any Sri Lanka. Ny andraikitry ny mari-pana rivotra dia tanterahan'ny mpankafy miorina amin'ny valindrihana.
Misokatra ny varavarankely amin'ny sarety, izay manampy ny sary haka sary tsara ny sary panorama mahafinaritra an'i Sri Lankan.
Mijanona 45 ° ny seza eo amin'ny lamasinina mandritra ny andro, amin'ny andro antoandro no esorina ny seza.
Ireo fiara ireo ihany koa dia ahitana toerana mijoro, izay mety ho tafiditra amin'izany raha mankeny amin'ny lalana malaza amin'ny ora maika ianao.
Fiara kilasy faharoa any Sri Lanka
Fiara kilasy fahatelo
Ny fiara kilasy fahatelo dia feno seza misy seza tsy voamboatra. Sahala amin'ilay kilasy faharoa dia feno mpankafy sy varavarankely misokatra ireo fiara ireo. Ivelany kosa, ankoatry ny endrika ivelany izay tsy dia misy fitafy, saika tsy mitovy amin'ny fiara an-kilasy faharoa. Vola kely samy hafa ary maloto ny zavatra hafa rehetra.
Mety ho feno olona be izy ireo. Ireo fotsiny ireo fiara izay midika fa mpandeha saika mihantona amin'ny varavarana misokatra amin'ny lamasinina (Eny, eny! Ao amin'ireo fiara ao amin'ny kilasy faharoa sy fahatelo dia tsy mihidy ny varavaran'ny fiara. Io no Sri Lanka 🙂)
Fiara fahatelo tao Sri Lanka
Lamasinina ao an-toerana
Ao ambanivohitr'i Colombo dia misy koa ny fiaran-dalamby mandeha amin'ny halavirana kely miaraka amin'ny fijanonana maro be. Ohatra, rehefa raisina ny fijanonana, lalana iray 35 km ny halavany dia mety haharitra adiny iray sy sasany.
Ny garan-dalamby toy izany dia mitovitovy amin'ny sarety amin'ny metro.
Sarintany an-dalamby any Sri Lanka
Sri Lanka Railway Map (2020)
Ny fifandraisana amin'ny làlamby any Sri Lanka dia asehon'ny sampana 10, izay miparitaka manerana ny Nosy.
Amin'izao fotoana izao (2020) dia miasa mafy ny sampana Colombo Fort - Matara. Tamin'ny taon-dasa, ny tobin'ny Beliatta no nanatahana azy.
Garan-dalamby ao Beliatta
Toy izao ny endriky ny tapakilan'ny lamasinina ao Sri Lanka
Sidina kely ireo tapakila ireo. 5 amin'ny 3 sm. Izy ireo dia manondro ny kilasin'ny fiara sy ny saran-dalana. Ny tapakila ho an'ny kilasy faharoa sy voalohany dia angonin'ny konditaly. Ny tapakila mankany amin'ny kilasy fahatelo dia tsy hajaina.
Ao an-damosin'ny tapakila dia matetika manontana (ny daty nividianana ny tapakila)
Mampalahelo fa tsy azo atao ny mividy mialoha tapakila amin'ny alàlan'ny Internet amin'ny lamasinina Sri Lankan mahazatra. Na izany aza, misy ny lamasin'ny fizahan-tany sy ny fiara mpizahatany tsirairay. Azonao atao ny mividy tapakila amin'ny alàlan'ny tranokala. 12go.asia. Na ampiasao fotsiny ilay endrika eto ambany:
Sri Lanka Formulir Search Fikarohana lamasinina + Prices
Tantara fohy momba ny lalamby any Sri Lanka sy ny fampahalalana an-jambany hafa
Ny kilasy faharoa dia mihoatra lavitra noho ny mitaingina am-pitiavana any Sri Lanka. Ny varavarankely tsy misokatra sy ny mpankafy dia ampy hahatsapa fahatsapana mahafinaritra. Fanampin'izay, ny vavahadin'ny fiara malalaka misokatra dia toerana mafana indrindra ho an'ny faritra tsara indrindra amin'ny tany sary izay manidina eo am-baravarankely.
Ary tena azo ekena ho an'ny kilasy faharoa ny vidiny. Amin'izany fotoana izany, toy ny ao amin'ny kilasy voalohany dia hita fa be loatra izany, indrindra raha tonga amin'ny lalan'ny Colombo - Kandy.
Salanisan'ny salanisa 5 / 5. Isan'ny isa: 13